Jamie Carragher Oo Laga Joojiyay Shaqadii Falqaynta Champions League Kadib Inantii Yarayd Ee 14-Sano Jirka Ahayd Ee Uu Candhuufta Ku Tufay. – GOOL24.NET
Jamie Carragher Oo Laga Joojiyay Shaqadii Falqaynta Champions League Kadib Inantii Yarayd Ee 14-Sano Jirka Ahayd Ee Uu Candhuufta Ku Tufay.
Halyayga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher isla markaana ah mid ka mid ah khabiirada kubbada cagta ee Sky Sports ugu fir fircoon ayaa todobaadkan dhexda u galay arin muran badan dhalisay kadib markii la helay muuqaal isaga oo candhuuf ku tufaya inan yar oo 14 sano jir ah kadib markii ay kooxdiisii hore ee Liverpool guuldaro ka soo gaadhay Manchester United.
Jamie Carragher oo ka cadhooday nin ku dacaayadeeyay guuldaradii Liverpool ka soo gaadhay Manchester United ayaa ninkan inantiisa yar oo la socotay oo 14 sano jir ah candhuufeeyay taas oo keentay in si wayn loo eedeeyay isla markaana shaki la galiyay shaqadii falaynta ahayd ee uu ka qabanayay Sports oo Premier League ah iyo TV3 oo Champions League ah.
Maamulka TV3 oo ah channel dalka Denmark laga leeyahay ayaa go’aan ku gaadhay in Jamie Carragher ay ka joojiyaan shaqadii uu ka qaban lahaa Old Trafford marka ay Sevilla soo boonayso kooxda Manchester United iyada oo booskiisa uu shaqadan ka qaban lahaa laga saaray.
Jamie Carragher ayaa telefoon kula xidhiidhay qoyska uu dhibaatada u gaystay wuxuuna ka raali galiyay falka dhaqan xumada ah ee uu kula kacay gabadha yar ee 14 sano jirka ah. Jamie Carragher ayaan ka soo muuqan doonin Champions League marka ay Sevilla iyo Manchester United talaadada ku wada ciyaarayaan Old Trafford.
Agaasimaha TV3 ee Peter Norrelund oo arintan ka hadlayay ayaa yidhi: “Wax fiican uma muuqato. Waxay ahayd in uu barri joogo Old Trafford ee kulanka United-Sevilla, waxaanu dooranay in uu iska fadhiyo. Shaqaale ayaanu Liverpool u dirnay, sidaa daraadeed sheekada ayaanu ka heli karnaa”.
Dhinaca kale Sky Sports ayaa arinta Jamie Carragher ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyada oo wada hadalo xaasaasi ah ay ka yeelan doonaan arintan waxayna Sky Sports arinta Carra ku tilmaameen: “Waa dhaqan aan la aqbali karin waxaanu la hadli doonaa Jamie’.
Saaka Jamie Carragher ayaa lagu sawiray London Euston Station wuxuuna sheegay: “Markale ayaan la hadli doonaa qoyska maanta isla markaana xalay ayaan iyaga la hadlay. Waan raali galiyay, dabcan waxay ahayd wax dhaqan ka baxsan. Maanta ayaan markale raali galin doonaa”.